Translator Newsletter: Fiteny madinika, Sary-sy-soratra sy maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2019 3:41 GMT
Miarahaba ny mpikambama ato amin'ny GV!
Ny tsara sy ny ratsy amin'ny maha mpandika teny mahaleotena
Satria maro amintsika no mahaleotena, dia fantantsika fa maro amin'ny fotoana no feno na tsy misy mihitsy. Nanoratra ity lahatsoratra ity ny Fikambanan'ny Mpandika teny Delaware Valley mba hiresaka momba ny fomba ahafahanao miatrika ireo fivadibadihana sy ny sangodina amin'ny fanaovana fandikan-teny mahaleotena, manomboka amin'ny fomba famarotana ny tenanao mandritra ny fotoana malalaka anananao ka hatramin'ny fanaovana lisitra “indray andro”. Vakio ary zarao ny sasany amin'ireo paikadinao manokana!
Fitantanana tetikasa fandikan-teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny www.translatorsfamily.com
Efa nihevitra momba ireo dingana rehetra hahazoana fandikan-teny avy amin'ny mpanjifa hatramin'ny mpandika teny sy ny miverina ve ianao? Antsoina hoe mpitatana tetikasa fandikan-teny ny olona mikarakara izany rehetra izany ary tena zava-dehibe ho an'ny orinasa lehibe momba ny fandikan-teny izy ireo! Nanoratra ity lahatsoratra ity ny Fianakaviamben'ny Mpandika Teny mba hilaza aminao bebe kokoa momba ny fisafidianana ity asa ity ho an'ireo liana.
Pikantsary nalaina tao amin'ny translationista.net
Araka ny filazan'ny TRANSLATIONiSTA, “Homarihana amin'ny 22 Aprily 2016 ny tsingerintaona faha-400 nahafatesan'i Cervantes. Mba hanamarihana izany, manangona fandikan-teny amin'ity fehezan-teny manaraka avy amin'ny sasin-tenin'ny Novelas ejemplares an'i Cervantes ity ny Ivon-toerana Hispanika ao amin'ny Oniversiten'i Kolombia:
Alefaso ato hatramin'ny 29 Martsa 2016 ny fandikan-teninao.
Mpandika teny madinika
Pikantsary nalaina tao amin'ny thoughtsontranslation.com
Fantatsika rehetra fa manana tsena ny fandikana ny teny Espaniola, Frantsay sy Alemà. Saingy ahoana ny amin'ny Tagalog na Icelandic? Ahoana no hametrahanao sehatra ho an'ny tenanao ao amin'ny indostrian'ny fandikan-teny raha toa ka tsy manana mpihaino betsaka ny fiteninao? Vakio raha te-ahafantatra izay azonao atao!
Sary sy soratra fandikan-teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny Facebook